बुक विल्डिङमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टले आईपीओ ल्याउँदै, मूल्य ७५० नै किन ? - Aarthiknews
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङमार्फत साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले बुक विल्डिङमार्फत प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
७५० रुपैयाँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि शेयर जारी गर्न आशय मूल्य निर्धारण गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि भने यसको १० प्रतिशत कम अर्थात ६७५ मा शेयर निष्काशन गर्न सक्ने सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत दाहालले जानकारी दिए ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओको मूल्य ७५० नै राख्नुबारे यस्तो छ कम्पनीको स्पष्टिकरण
१. कम्पनिको दैनिक क्लिकर उत्पादन क्षमता ३००० मेट्रिकटन तथा वार्षिक २ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता र कम चुक्ता पुँजीमा बढी उत्पादन हुदा बढी प्रतिफल दिन सक्ने,
२. कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछि नै नाफा कमाउदै आएको र विगत ३ वर्षको औषत मुनाफा (कर पछिका) वार्षिक १०४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएको,
३. विगत तीन वर्षको औषत इपीएस ५२ रुपैयाँ रहेको र आगामी तीन वर्षको औषत ईपीएस ४५ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रक्षेपित गरिएकाले,
४. कम्पनीको रिजर्भ २०७७ माघ मसान्तसम्मको अत्यमा २३१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको,
५. हाल कम्पनीको सम्पति २००० करोड रहेको,
१. आगामी ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएकाले बढी प्रतिफल दिनसक्ने,
७. आईपीओबाट प्राप्त रकम मध्ये ४०० ले ऋण भुक्तानी गरी शत प्रतिशत ऋण मुक्त हुने बाँकी रकमले उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्ने योजना रहेकोले, यसबाट ४ वर्ष पछि बार्षिक प्रतिफल ७५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने प्रक्षेपण गरीएको,
८. आईपीओ जारी पश्चात पहिलो ३ महिना भित्र १०० बाोनश शेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निश्चित भएकोले सो वापत झण्डै १०० रुपैयाँ प्रति शेयरको आम्दानी तत्कालै हुने,
९. शेयरधनिले तिरेको ६५० रुपैयाँ प्रिमियमको १५ प्रतिशतले हुन आउने प्रतिशेयर ९७ रुपैयाँ ५० पैसा कम्पनिको रिजर्भमा रहने भएकोले सो वापत थप बोनस शेयर जारी हुने सम्भावना रहेको,
१०. आईसीआरएबाट आईपीओ रेटिङ बीबीबी प्लस पाएकोले कम्पनि लगानी कर्ताको लागि औषतभन्दा बढी राम्रो रहेको । साथै, आईसीआरए रेटिङ अनुसार कम्पनिको चुनढुंगा तथा ढुवानी को लागत अन्य सिमेन्ट उद्योगभन्दा कम रहेकोले कम्पनिले बढी प्रतिफल दिन सक्ने,
११. संस्थागत लगानी कताले ७५० रुपैयाँ मुल्य तोकेमा सर्वसाधारणले ७५० मा १० प्रतिशत घटाई अर्थात ६७५ रुपैयाँमा पाउने भएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सहुलियत भएको,
१२. कम्पनिले आफ्नो हाल सम्मको रिजर्भ बाट १० प्रतिशत बोनस शेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभाश दिने भएकोले शेयर खरिदको तीन महिना भित्रै लगभग १०० रुपैयाँ बरावरको प्रतिफल प्राप्त हुने, यसरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको शेयर मुल्य ५७५ मात्र पर्न जाने,
१३. २५ वर्षभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग संचालन गरेको अनुभवी संचालकहरुबाट संचालित उद्योग भएकोले संचालन लागत न्यून रहेकोले,
१४. डेनमार्कबाट आयातित अत्याधुनिक भीआरएम प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा विद्युतमा ३० प्रतिशत वचत हुने तथा कोइला खपतमा २० प्रतिशतसम्म बचत हुने भएकाले लागत कम भई बढी प्रतिफल दिने,
१५. कम्पनीसंग ९० वर्ष पुग्ने चुनढुंगा खानी रहेकोले उत्पादन क्षमता बढाउदै लैजान सजिलो रहेको छ ।